Ungazivikela kanjani kwibhoklolo ohlala nalo ngesikhathi sikathaqa?
SELOKHU kuphume umyalelo wokuthi abantu mabahlale emakhaya bangabi wuvanzi ngenhloso yokulwa nokusabalala kweCorona, angaphezu kuka-20 000 amacala asevuliwe amayelana nodlame lwasemakhaya oluhlanganisa ukushaywa kwabesifazane ngabantu abathandana nabo. Isithombe esigciniwe: Tracey Adams/African News Agency/ANA
BONGIWE ZUMA | April 16, 2020
SELOKHU kuphume umyalelo wokuthi abantu mabahlale emakhaya bangabi wuvanzi ngenhloso yokulwa nokusabalala kweCorona, angaphezu kuka-20 000 amacala asevuliwe amayelana nodlame lwasemakhaya oluhlanganisa ukushaywa kwabesifazane ngabantu abathandana nabo.
Kulokho kubalwa ukuklinywa, ukuthukwa nokuquliswa amacala angekho konke okuholela ekutheni bashaywe. Ongoti bahlale bekhala ngokuthi abesifazane abahlukunyezwayo bayaphuza ukubika lezi zigameko zokuhlukunyezwa. Abanye basuke bezitshela ukuthi kuzodlula ngelinye ilanga, okuyinto engenzeki. Lokhu kwenzeka nakwabesilisa abahlukunyezwa ngabesifazane.
Yize konke lokhu kungagqugquzelwa kodwa uma kungenzeka ukuthi ukuleyo nkinga yokuvalelana nebhoklolo kulezi zinsuku ongoti bathi kukhona ongakwenza ukuze uzivikele ekushayweni noma ekulinyazweni. Bathi abantu abahlale behlukunyezwa bazi kahle kamhlophe ukuthi baba kule nkinga uma kunjani futhi bayakwazi nokubona uma sezizobanetha.
Bathi njengoba wazi, lokho kusho ukuthi zikhona izinto ongazenza ukugwema ingxabano. Uyazazi nezinto umuntu okuhlukumezayo azisebenzisayo uma esefuna ukuqala izinto zakhe. “Abanye babanga izinhlelo ezidlala kwithelevishini, ukudla okuzodliwa ngalolo suku, imali, imiyalezo nezingcingo ezingena kwiselula yomunye noma imisebenzi yasendlini. Zonke lezi zinto ziba nomthelela omubi kubantu abathandanayo kuze kube wumkhuba abawujwayele ukuzibanga kugcine kukhona oshawayo noma oklinywayo,” kusho ungoti kwezobudlelwane uDkt Sharon Smith.
Nazi ezinye zezinto ezingakusiza ekhaya:
- Fihla izikhali ezisendlini
Kuyenzeka ukuthi kube nezikhali ezenza imisebenzi ejwayelekile ekhaya njengommese, igeja, ubhushu, ifosholo nezinye izinto eziwusizo. Ngesinye isikhathi zingaba yingozi kuwe. Kufanele zihlale kude futhi kungabi yindawo ayaziyo nayijwayele umuntu onodlame. Uma kwenzeka ukuthi omunye wenu unesibhamu, masingabi sobala noma sisuse ekhaya ngokushesha.
- Gwema ukuqophisana naye kakhulu
Kuyinto ejwayelekile ukuthi abantu ababili uma bekhuluma kufike lapho bengaboni khona ngasolinye bese beqala ukuqophisana ngamazwi. Inkulumo kungenzeka iphele ningasazwani, ngakho kubalulekile ukuthi ugweme ukuqophisana naye noma ngabe uyaphuma esandleni, myeke wehlele ngezansi, ukubalekela udlame olungenasidingo.Khumbula ukuthi lokho ngeke ukwazi ukukwenza impilo yakho yonke, kumele ubuye uthathe isinqumo sokushiya kulobo budlelwane. Ubudlelwane obuhle yilobo enikwaziyo ukuthi nixoxe kahle ngaphandle kokulwisana, nithole isixazululo sento eniyibangano okanye namukele ukuthi anivumelani ngento ethile kodwa kube nokuthula.
- Umuntu wesithathu
Yize kuyizindaba zenu zothando kodwa makube khona nomunye umuntu wesithathu ozokwazi ngenkinga yenu ukuze kube lula nokuthi angenelele noma ahlale ekugadile ungehlelwa okubi. Hlala unalo icebo ozophephela kulo. Kunezinombolo nezinhlangano eziningi ezihlala zilinde izingcingo zabadinga usizo nabahlukunyezwayo. Hlala unazo ukuze uma kwenzeka, uzokwazi ukubazisa ngokushesha. Noma ngabe uzizwa ungakabi nesibindi sokuvula icala kepha kumele uthole nezeluleko.
Nazi ezinye zezinombolo ongasizakala kuzo, iWomen Abuse 0800 53 54 55, Suicide helpline 0800 567 567, Gender Based Violence Command centre 0800 029 999, South African Police 08600 10111, Family Violence neChild Protection and Sexual Offences Unit 0800 150 150.